Maxaa dhici doona haddii uusan xisbina ku guulaysanin doorashada UK? - BBC News Somali
Maxaa dhici doona haddii uusan xisbina ku guulaysanin doorashada UK?
Halkan ka akhriso xog muhiim ah oo ku saabsan doorashada Britain iyo waxa dhici kara haddii la waayo xisbi ku guuleysta doorashada guud.
Ma xisbiga ku guulaysta kuraasta ugu badan ee xildhibaannada ayaa dhisi doona dawladda xigta?
Xisbigii hela xildhibaannada ugu badan marka la wada tiriyo dhammaan codadka laga dhiibtay 650 degmo, ayaa caadiyaan lagu qeexaa in uu guulaystay, qofka hogaaminaya xisbigaasna badanaa wuxuu noqdaa ra'iisalwasaaraha xiga.
Balse waxaa laga yaabaa in aysan hadda middaasi dhicin haddii cid aqlabiyad hesha la waayo. Waxaa macquul ah in xisbiga kaalinta labaad gala uu xukuumad dhiso isaga oo gacan ka helaya xisbiyada kale.
Sidee qofi ugu guulaystaa doorashada?
Sida ugu sahlan ee ra'iisalwasaare loo noqdo waa in lagu guulaysto waxa loogu yeero aqlabiyadda xildhibaannada - aqlabiyadna waa in xisbigaagu helo tiro ka badan marka la isku daro xubnaha xisbiyada kale oo dhan.
Imisa xildhibaan ayaad u baahan tahay si aad aqlabiyad u hesho?
Tirada ugu yar waa 326 xildhibaan. Tiradaas ayaa ku filnaanaysa in xukuumaddu ay u codayso sharciyo cusub iyadoo aan caqabado kala kulmin kuwa ka soo horjeeda.
Maxaa ku dhici doona wadahadalladii ka bixitaanka Midowga Yurub ee Britain?
Waxaa laga yaabaa in ay dib u dhacdo haddii cidina ay aqlabiyad ku yeelan waydo xildhibaannada ama haddii uu ra'iisalwasaare noqdo Jeremy Corbyn.
Hadda waxaa lagu wadaa in ay wadahadalladu billawdaan 19 bishan lixaad, laakiin haddii ay noqoto in ay wakhti qaadato dhisidda dawladda cusub markaas waxaa laga yaabaa in Midawga Yurub la waydiisto in dib loo dhigo wadahadallada.
Door intee la eg ayay leedahay Boqoraddu?
Hoggaamiyaha xisbigii boqoradda u sheega in uu haysto aqlabiyad shaqayn karta ayaa ah midka ay boqoraddu u fasixi doonto in uu xukuumad dhiso.
Boqoraddu ma dhex gasho siyaasadda xisbiyada, sidaa daraadeed ma jirto marxalad ay ku magacaabi karto ra'iisalwasaare.
Xisbiga Muxaafidka UK oo lagu wado inuu helo kuraasta ugu badan